« A star is born » : Tsiambaratelo vitsy momba ny horonan-tsary
Horonan-tsary nanamarika ny fiainana ara-mpanakanton’i Lady Gaga ny « A star is born » nivoaka tamin’ny taona 2018. Nahatonga resabe ity horonan-tsary ity, ary na hatramin’izao aza, maneran-tany mihitsy. Misy ireo tsiambarantelo vitsy mba tsara ho fantatra mahakasika ity horonan-tsary ka handeha ho jerentsika ireo.
· Manome voninahitra an’i Judy Garland izy
Ireo mpankafy ilay mpihira an’i « Somewhere over the rainbow » dia nahatsapa izany. Any anatin’ilay horonan-tsary mantsy dia mihira io hira io i Lady Gaga. Fomba iray entiny hanomezam-boninahitra an’i Judy Garland izay nandray anjara toerana tsotra sy mandona fo toa azy, tamin’ny fotoana niandohany tao anatin’ny tontolon’ny sarimihetsika.
· I Lady Gaga mihitsy no nisafidy ny sasany tamin’ ireo niara-nilalao taminy
Nangatahin’i Lady Gaga ho Shangela Laquifa Wadley mihitsy no nandray ny anjara toeran’ilay « mentor ». nanazava izy fa ny ankamaroan’ireo « scène » nolalaovina tao amin’ilay klioba ho an’ny «dragqueen » dia noforonina fa tsy efa voasoratra akory.
· Tsy nanao maquillage mihitsy
Nandritra ny volana maro naharetan’ny fanodinana ny horonan-tsary dia nataon’i Lady Gaga mihitsy izay hiainana tanteraka ao anatin’ilay anjara toerana nolalaoviny. Mpihira tsotra sy tsy be filirony i Ally ka safidy teo amin’ny lafiny artistika mihitsy izany no nisehoany tsy nisy « maquillage ». herinandro vitsy mialohan’ny fanodinana ilay horonan-tsary dia tsy nanao maquillage mihitsy i Lady Gaga.
· Misy fianakaviany ao anaty horonan-tsary
Safidin’i Lady Gaga mihitsy ny ho voadidin’ireo olona akaiky azy. Any anaty horonan-tsary any izany dia ahitana ny mpamorona didin’akanjony, ny mpanosotra « maquillage », mpanao volo sy mpandihiny.
· Tsy misy « playback »
Antony iray mahatonga ny horonan-tsary hamoaka ilay hafatra tena tiana ho ampitaina ao anatiny ilay izy tsy nomanina be loatra. Indrindra fa maro ireo hira izay nohiraina ao anatin’ity horonan-tsary ity. Voalazan’i Bradley Cooper, izay sady namokatra no nilalao tao anatiny fa tsy misy nalaim-peo mialoha ireo hira rehetra.
· Efa horonan-tsary faha-4
Fahaefatra amin’ny horonan-tsary « A star is born » nivoaka ity ahitana an’i Lady Gaga sy Bradley Cooper ity. Tamin’ny taona 1937 no nivoaka ilay film « original » novokarin’i William A ary nolalaovin’i Janet Gaynor sy Fredric March.